Distrikan’Ankazoabo – Faritra Melaky: 200 Ar sisa ny vidin’ny tongolo any amin’ny mpamboly | NewsMada
Distrikan’Ankazoabo – Faritra Melaky: 200 Ar sisa ny vidin’ny tongolo any amin’ny mpamboly
Distrika iray mpamokatra tongolo ny any Ankazoabo, hatramin’ny taona maro. Raha raisina, ohatra, tany amin’ny taona 90, seha-pihariana natanjaka ny voly tongolo. Tsy izany intsony ny zava-misy ankehitriny.
Mety tsara amin’ny voly tongolo ny toe-tany any amin’ny distrikan’Ankazoabo, faritra Melaky. Tany amin’ny taona 90, nahavokatra 25-30 t/ ha ny azo ao amin’io distrika io. Tsara hatrany ny vokatra hatrany amin’ny taona 2011, nahitana 600 t (tongolo egypta na tongolobe) ny taom-pambolena iray.
Teo ihany koa ny tetikasa AD2M (Programme d’appui et de développement de Melaky et du Menabe), nanampy tamin’ny fanatsarana ny famokarana tongolo. Voakasika tamin’izany ny distrikan’i Miandrivazo, i Mahabo, niampy an’Ankazoabo. Nitombo ny velaran-tany novolena, nitombo, araka izany, koa ny vokatra niakatra ary tsara ny vidiny.
30 taona aty aoriana, tantara sisa ny voly tongolo any Ankazoabo, amin’ny vokatra sy ny vidiny. Kivy tanteraka ny mpamboly fa zara raha misy mpandray ny vokatra amin’ny vidiny …200 Ar sisa izao ny kilao! Nefa ny vidiny tonga amin’ny mpanjifa eto Antananarivo, 2 000 Ar sy 2 500 Ar ny kilao. Mpanangom-bokatra, mpitatitra, mpaninjara no tena mahazo tombony fa matiantoka tanteraka ny mpamboly, tsy misy mpiaro. Maina ihany koa ny tany manimba ny baiboho.
Mora vidy no ho ny tany amin’ny taona 90
Mbola mora ny vidin’ny tongolo alaina amin’ny mpamboly amin’izao fotoana izao, raha oharina ny tany amin’ny taona 90, izay 300 Ar ny kilao tamin’izany fotoana izany rehefa miakatra ny vokatra manomboka volana jolay toy izao hatramin’ny oktobra. Tany amin’ny taona 90 ihany, 1 000 Ar hatramin’ny 1 400 Ar ny kilao amin’ny fotoana tsy fiakaran’ny vokatra. Tsy misy mihitsy ifandraisana amin’ny valanaretina Covid-19 fa ny fanararaotana no betsaka.
Manana ny toerany lehibe eo amin’ny lafiny varotra ny tongolo, miaraka amin’ny vary, ny tsaramaso, na ny hasy any amin’ny faritra Menabe ihany. Ny hasy koa anefa izao, potika ny vidiny, raha 1 300 Ar nifanarahana, latsaka 700 Ar sisa izao. Tombony amin’ny tongolo, vokatra azo tahirizina tsara, loharanom-bola amin’ny fotoana maina. Mora ihany koa ny fitaterana azy eto an-toerana. Mpamokatra tongolo koa ny any Mampikony, faritra Sofia.